साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले भुटानमाथि ४-० जित हासिल गरेको छ । बिहीबार चौथो गोलको रुपमा नेपालका निराजन खड्काले गोल गरेका हुन् । यसअघि ७९ औं मिनेटमा नेपालका लागि स्ट्राइकर भरत खवासले तेस्रो गोल गरेका थिए ।
प्रतिद्वन्द्वी रियल मड्रिड लगातार तीन पटक युरोपियन च्याम्पियन बनेपछि बार्सिलानाले यो सिजन उपाधि च्याम्पियन्स लिग जित्ने संकल्प गरेको छ । यदि बार्सिलोनाले यो सफलता पाएमा लुइस स्वरेज आफ्ना स्ट्राइकर पार्टनर लिओनल मेस्सीका लागि खुशी हुनेछन् ।
क्रिष्टियानो रोनाल्डो भन्दा २७ गुणा धनी, लिओनल मेस्सीभन्दा ३३ गुणा धनी र नेइमार भन्दा ५० गुणा धनी फुटबलर ? त्यो पनि भर्खर २० वर्ष फुटबलर ? हो, उनको नाम फइक जेफ्रि बोल्किया हो । बोल्किया फुटबल खेलेर धनी भएका भने होइनन् । ब्रुनाइका बोल्किया ब्रुनाईको सुलतान परिवारका हुन् । जसको पारिवारिक सम्पत्ति २० बिलियन डलर रहेको बताइन्छ ।
साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले खराब सुरुवात गरेको छ । मंगलबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल इन्जुरी टाइममा गोल खाँदै पाकिस्तानसँग २-१ गोल अन्तरले पराजित भएको हो । इन्जुरी टाइम सकिनै लाग्दा मोहम्मद अलीले हेड गोल गर्दै पाकिस्तानलाई जित दिलाएका हुन् ।